प्रभु बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन - Wnepal.com
प्रभु बैंकले साउन १९ गते सोमवारदेखि विक्री खुला गरेको ऋणपत्रमा आवेदन दिने साउन २३ गते शुक्रवार अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता रू. १००० दरको रू. २ अर्ब बराबरको २० लाख कित्ता ऋणपत्र विक्री खुला गरेको हो ।
कुल कित्तामध्ये १२ लाख कित्ता बैंकले व्यक्तिगत तवरबाट विभिन्न संघ संगठनहरुलाई विक्री गर्नेछ भने रू. ८० करोड बराबरको ८ लाख कित्तामध्य ५ प्रतिशत अर्थात ४० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषका लागि छुट्याएर बाँकी ७ लाख ६० हजार कित्ता भने सार्वजनिक निष्कासन मार्फत सर्वसाधारणलाई विक्रीमा ल्याएको हो । वार्षिक १० प्रतिशत व्याजदरको ८ वर्षे अवधिको प्रभु बैंक डिबेञ्चर २०८४ जारी गर्न लागि प्रभुले असार ३१ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । यो ऋणपत्र विक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ ।
यो ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेहरुले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ३ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । छिटोमा साउन २३ गते र ढिलोमा भदौ १ गतेसम्म ऋणपत्र विक्रीको मिति तय भएपनि छिटो अवधिभित्रै माग भन्दा बढी आवेदन परिसकेकाले विक्री बन्द गर्न लागेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
प्रभुको यस ऋणपत्रलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले समयमानै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रुपमा सुरक्षित मानिने केयर एनपी त्रिपल बी रेटिङ्ग प्र्रदान गरेको छ । आवेदन दिदाँ सि–आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका सम्पूर्ण शाखाबाट दिन सकिनेछ भने मेरो शेयर मार्फत घरमै बसेर पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।